Tartan Sports oo maanta lagu qabtay degmada Xamarweyne “Sawirro” – Radio Muqdisho
Tartankan ciyaaraha kubadda cagta ah oo loogu tala galay in lagu xoojiyo is dhex galaka bulshada ayaa maanta lagu qabtay degmada Xamarweyne.
Tartanka ayaa waxaa ka qeyb galay maaamulka degmada Xamar weyne saraakiil ka socotay baliiska Soomaaliyeed iyo dadweyne kale oo aad u fara badan oo ka kala yimid waaxyaha ay ka koobantahay degmada Xamar weyne ee gobolka Banaadir, kaasi oo looga furay garoonka ciyaaraha kubada cagta degmada Xamarweyne .
Waxaana ciyaartaasi kubadda cagta ah ay dhexmartay laba kooxood oo kala matalayay ciidanka booliiska degmada Xamarweyne iyo koox iyana mataleysay shacabka ku nool degmada Xamarweyne, waxaana ciyaaryahannada labadaasi kooxood laga soo kala ururiyay Afarta waaxyood oo ay ka koobantahay degmadaasi.
Gudomiyaha guddiga is boortiska degmada Xamarwene C/llaahi Jeylaani Maxamed ayaa sheegay in tartankan loogu talagalay isdhexgalka bulshada ku nool degmada Xamarweyne, isagoo tilmaamay iney sii kordhin doonaan tartannada noocan oo kale ah.
Guddoomiyaha degmada Xamarweyne C/qaadir Maxamed C/qaadir ayaa shegay tartankan ciyaaraha ayaa sheegay in tartamada isporti ay qeyb ka qaadan karaan isdhexgalka bulshada, sidaasi darteedna uu maamulkiisu dhiirigelinayo kulamada isportiska degmada Xamarweyne.
Sawir-qaade Muuse Cismaan Abtow